‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डस’: अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमका सहभागीहरूको प्रतिक्रिया | आर्थिक अभियान
२०७८ कार्तिक, १७
यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ
अध्यक्ष, स्टार्टअप तथा इन्नोभेशन समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो तालीम कार्यक्रम सफल रह्यो । हाइब्रिड विधिले सञ्चालन भएको यो कार्यक्रममा भौतिक रूपमा तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरैले सहभागी हुन पाउनुभयो । कतिपय स्टार्टअप उद्यमीहरूले विज्ञहरूसँग सोझै सम्पर्क गर्न पाउनुभयो । उहाँहरूलाई आफ्ना प्रश्न र संशयहरूको निवारण गर्ने अवसर मिल्यो । यस कार्यक्रमले स्टार्टअपहरूलाई अनुभवी मेन्टरसँग जोडिन सहयोग गरेको छ । यस्तो कार्यक्रम बारम्बार गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कार्यक्रम निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो
स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
न्यू बिजनेश एजले आयोजना गरेको स्टार्टअप समिट अन्तर्गत अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम एकदमै फलदायी लाग्यो । यस्तो खालको कार्यक्रमको आवश्यकता देखेरै महासंघ यसको एसोसिएट पार्टनरको रूपमा रहेको हो । कार्यक्रम पूर्णरूपमा सफल रह्यो । खासगरी प्रशिक्षकहरूबाट स्टार्टअप बिजनेशमा लाग्नेहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी व्यावसायिक अनुभव आदानप्रदान भएको छ । यसले समग्र स्टार्टअप व्यवसायकै प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
यस्ता कार्यक्रम अन्य संस्थाले पनि गर्नुपर्छ
सफल पार्टनर्सका संस्थापक
यस प्रकारको कार्यक्रम स्टार्टअप व्यवसायीका लागि अन्त्यन्त जरुरी छ । त्यसैले, यस्ता प्रकारका कार्यक्रम अन्य संस्थाले पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम एउटाले मात्र गरेर हुँदैन । स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न यस किसिमको कार्यक्रम भइरहनुपर्छ ।
युवा जोशलाई थप ऊर्जा मिलेको छ
कार्यक्रममा पूरा अवधि सहभागी भएँ । कार्यक्रम एकदमै फलदायी र प्रेरणादायी लाग्यो । यसले केही गरौं भन्ने युवा जोशलाई थप ऊर्जा थपिदिएको छ । म विदेशबाट फर्केर आएर नेपालमै केही गरौं भन्ने सोचका साथ अहिले खरायो पालन गरिरहेको छु । मैले भविष्यमा खरायो फार्मलाई अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छु । अहिले २० लाख लगानी पुगिसकेको छ । काम गरिरहेको छु । लक्ष्यमा एक दिन पुग्छु भन्ने विश्वास छ ।
कार्यक्रमका प्रशिक्षकहरूको अनुभव प्रेरणादायी छ
प्रबन्ध निर्देशक, शर्मा एण्ड कं.
स्टार्टअप बिजनेश सम्बन्धी यस्तो अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुन सकिरहेको थिएन, जुन न्यू बिजनेश एजले आयोजना ग¥यो । यसबाट धेरै सिक्ने अवसर पाएको छु । खासगरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुन, खल्ती डिजिटल वालेटका सहसंस्थापक एवं निर्देशक अमित अग्रवालको प्रस्तुति साँच्चै प्रेरणादायी थियो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमले स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन
प्रमुख, एसएमई डिपार्टमेन्ट, कुमारी बैंक लिमिटेड
‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एण्ड अवाडर््स’ कार्यक्रमको प्रमुख प्रायोजक बन्न पाउँदा हामीलाई धेरै खुशी लागेको छ । अहिले स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी राज्यले नीति लिइरहेको छ । बैंकहरूले समेत सोही अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर स्टार्टअपबारे धेरैले बुझिरहनुभएको छैन । त्यसबारे बुझाउन पनि यस्तो खालको कार्यक्रम महŒवपूर्ण भएकाले कुमारी बैंकले यो कार्यक्रमलाई मुख्य प्रायोजन गरेको हो । गत शुक्रवार सम्पन्न अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम निकै प्रभावकारी थियो । यसले नवउद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्न ठूलो प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
स्टार्टअपको इको सिष्टम बन्न थालेको छ
सहसंस्थापक, नेपाल आन्ट्रप्रेनर्स हब
विशेषगरी यस्ता कार्यक्रमले स्टार्टअप क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप भन्न थालिएको १२÷१३ वर्ष भयो । अहिले आएर बल्ल यसको इको सिस्टम बन्न शुरू गरेको छ । यो अवस्थामा मिडियाहरूबाटै यस्ता कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । किनकि, व्यक्तिगत रूपमा गर्दा सीमित व्यक्तिलाई मात्रा थाहा हुन्छ । मिडियामार्फत गर्दा धेरैले यसबारे बुझ्ने अवसर पाउँछन् ।
सरकारले स्टार्टअपमैत्री नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
न्यू बिजनेश एजले आयोजना गरेको स्टार्टअप समिट एण्ड अवार्ड्स अन्तर्गत अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम साँच्चै प्रशिक्षणात्मक बन्यो । नवउद्यमीहरूले यसबाट धेरै जानकारी लिन पाएको महसूस मैले गरेकी छु । प्रक्षिशकहरूले स्टार्टअपसम्बन्धी सबै जिज्ञासा खुलस्त राखिदिनुभएको छ । स्टार्टअप बिजनेश अहिले धेरै बहसमा आएको, तर प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको विषय हो । यस्तो अवस्थामा प्रशिक्षण हुनुलाई सकारात्मक पाटोको रूपमा लिएकी छु । स्टार्टअपका लागि अहिले निजीक्षेत्र र सरकारले पनि गर्न खोजेको देखिन्छ । तर सरकारी नीति स्टार्टअपमैत्री भएको देखिँदैन । छिट्टै सोही उपयुक्त नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरी स्टार्टअप बिजनेशलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्टअपहरूका लागि लाभदायी
संस्थापक तथा निर्देशक, खल्ती डिजिटल वालेट
समग्रमा यो कार्यक्रमबाट हामी स्टार्टअपहरूका लागि निकै लाभ भयो । आशुतोष तिवारी, रञ्जित आचार्य, महावीर पुन जस्ता हस्तीहरूबाट धेरै कुरा सिक्न पाइयो । तर विज्ञहरूको कुरा सुनेर मात्र सफल भइने होइन । आफैले काम गर्न थालेपछि मात्र सिकाइ पक्का हुन्छ । स्टार्टअप व्यवसाय भनेको चेस खेले जस्तै हो । अर्काले चालेको चाल नै दोहो¥याएर चेस जितिँदैन । आफ्नै भिन्दै चाल चाल्नुपर्छ । यस क्रममा असफल पनि भइन्छ, चुनौती सामना गर्ने हिम्मत बढ्छ र सिकिन्छ पनि । सफलताको एउटै मन्त्र छैन । आफै मेहनेत गर्न पर्छ । अहिले सबैजसो स्टार्टअपलाई सही र प्रतिबद्ध सहकर्मी पाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ ।
व्यवसाय प्रवर्द्धनमा उत्साहित भएका छौं
स्टार्टअपको कार्यक्रममा जुम मिटिङमा बस्दा मलाई निकै उत्साह मिल्यो । ग्राहक आफैले बनाउनुपर्छ, ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने बोध भयो । ग्राहक कसरी चिन्ने भन्ने कुराले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ । हामी पर्यावरण जोगाउन प्लाष्टिकका झोला विस्थापित गर्न कपडाको झोला प्रयोग गरौं भन्ने अभियानमा छौं । कपडाका झोला विक्री गर्दै आएका छौं । अल्लो र ढाकाको कपडाबाट पर्स लगायत सामग्री बनाउँदै छौं । यस कार्यक्रमले थप लगानी गरेर अघि बढ्ने प्रेरणा दिएको छ । अब लगानी थपेर अघि बढ्छौं ।
उद्यमी बन्ने वातावरण बनिरहेको महसूस भयो
छिरिङ तेन्जिङ शेर्पा
थुलुङ दूधकोशी, सोलुखुम्बु
मलाई महावीर पुन सरको कुराले उद्यममा लाग्न निकै उत्साह दियो । अन्य प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षणले जोश पैदा गरेको छ । मैले मेरो गाउँमा एग्रो टुरिजम शुरू गरेको छु । त्यसको पूर्वाधारका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छु । अहिले किवीको खेती, लोपोन्मुख ५० किसिमका जडीबुटीको संरक्षण र त्यसको व्यावसायिक उत्पादनमा केन्द्रित गरेको छु । स्टार्टअप तालीमले व्यवसायलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्न मद्दत गरेको छ । उद्यमी बन्न अब नेपालमै वातावरण बनिरहेको जस्तो अनुभव गरेको छु ।
स्टार्टअपलाई चिन्न र चिनाउन सहयोगी
विशेषगरी यस कार्यक्रमले स्टार्टअप व्यवसायीलाई चिन्न/चिनाउन गर्न सहयोग पुगेको छ । यद्यपि, यसका कार्यक्रम अन्तर्गत गरिने अवार्ड वितरण प्रक्रियालाई भने पारदर्शी बनाउनुुपर्ने मेरो सुझाव छ ।
बैंकमा पैसा राख्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका कुन जिल्लाका नागरिक अगाडि ? [२०७९ असार, २०]